Posted by Tranquillus | Déc 21, 2021 | Shabakada
Dunida shaqada ee isbedeshay, dad badan ayaa raba inay joojiyaan shaqooyinkooda, bilaabaan ganacsi, ama beddelaan xirfadahooda si ay u qabtaan shaqo macno badan samaynaysa, naftooda iyo, ugu fiican, adduunka. Laakiin kacdoonada seismic ayaa sidoo kale ka dhacaya heerka dhaqaalaha sare. Aragtida dunidu si weyn ayay isu beddeshay tan iyo markii inteenna badani aanu galnay shaqada.
Gaar ahaan maadaama mashiinadu ay maanta wax ka badan qaban karaan intii aan malaynaynay. Waxay bedeli karaan shaqooyinka bini'aadamka oo aysan horay u bedeli karin. Mashiinadu waxay qaban karaan hawlo xisaabin, qalitaan, telefoon toos ah oo loogu talagalay boos celinta makhaayadaha, iyo hawlo kale oo soo noqnoqda. Mashiinnada ayaa sii caqli badanaya, laakiin qiimaha awoodaha bani'aadamku ka sarreeyaan mishiinnada ayaa weli ah mid muhiim ah. Maadaama shaqooyinkan lagu bedelay mashiino, dadku waa inay la qabsadaan oo ay horumariyaan xirfado si ay u sugaan mustaqbalka xirfadahooda.
U diyaar garow mustaqbalka Diisambar 21st, 2021Tranquillus
horeBeddel waxbarashada iyo tababarka: howlgalka hybridization!
socdaNoqo Freelancer, tallaabada 1: maskaxda iyo xaaladda maskaxda!